Home » Creative Writing » မစိမ်းပြာနှင့် မျက်တောင်တု
Posted by ဆုမြတ်မိုး on Aug 23, 2013 in Creative Writing | 15 comments
posted in my blog!!
တိန်… အနော်လည်း ဘွဲ့ယူတုန်းက မျက်တောင်တုတပ်တာကို အရမ်းသဘောကျတာ..
ဒါမယ့် စိတ်မရှည်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် စိတ်ပါမှပဲ အလှပြင်တယ်… (ထူးလည်း မလှပါဝူး… )
ဟိ..စာဖတ်ပြီး မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်…. ရယ်ချင်ပေမယ့် စိတ်မကောင်းဘူး..မျက်လုံးထဲ ကော်ဝင်တယ်ဆိုတော့ အတော်ခံရခက်မှာပဲ… နော်….
အတော်အလှကြိုက် တဲ့ ကလေးမလေး ထင်ရဲ့။
အရီးတော့ မျက်တောင်တု ကို တက်ဖူးတာ ပထမဆုံး ဘွဲ့ယူ တဲ့ ပွဲမှာဘဲ။
နဂိုက မှ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ သူ ဆိုတော့ အဲဒါကြီး မျက်စိ ရှေ့မှာ ရောက်နေတာ ကို မနေနိုင်လွန်း တာနဲ့ နောက် တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မတတ်တော့ဘူး။
အရေးကောင်းလေး မို့ ရွာထဲ ဝင်ပြီး စာတွေ မျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
နှစ်​စဉ်​နှစ်​တိုင်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်​မှာ ​ဒေါက်​ဖိနပ်​​ပေါက်​လို့ ​ထော့နင်း​ထော့နင်း​လေး​တွေလည်းသတိရမိတယ်​ဗျ ။
ဂျပ်​ဆင်​​ရှေ့မြက်​ခင်း​တွေထဲဓတ်​ပုံရိုက်​ဖို့ ဖိနပ်​ကိုင်​ပီးလမ်း​လျောက်​တဲ့ ​ကောင်​မ​လေး​တွေလည်းသတိယမိပါတယ်​
မျက်တောင်တု ကောင်းမှုနဲ့ မျက်လုံးနာတော့မလို့ပါလား
ဘာမှ မပြင်ဆင် မချယ်သဘဲ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ကောင်းပါသကွယ်
ဒီအဖြစ်ကလေးကနေ ပို့စ် တစ်ပုဒ် ထွက်လာတာကိုတော့
လေး ချား ပါ ကြောင်း
အဘ ၊ နဲနဲ ရွှီးမယ်နော် ။
အဘတို့ ယောက်ျားလေး ( တစ်ချို့ ) ရဲ့ အမြင်ကို သိချင်မယ် ထင်တယ် ။
အဘ အမြင်မှာတော့ ၊ မျက်တောင်တု တပ်တာဟာ ၊
ဓါတ်ပုံ VDO တွေ နှင့် အဝေးကြည့် မှာပဲ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေပြီး ၊
အပြင်မှာ / အနီးကပ် ဆိုရင် အဘ ကို ထူးပြီး မဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူး ။
အတုကြီးမှန်း သိနေတာကိုး ။
ဒဲ့ပြောရရင် ၊ အတုတွေ သုံးထားလို့ ၊
အယုံအကြည် နဲ သွားပြီး ၊ စိတ်တောင်ပိုပျက်သွားသေး ။
သူများလက်သည်းအရှည်ထားတာတွေ့တော့ ကိုယ်ကမကြိုက်လို့မထားချင်ပေမယ့် အပြင်သွားတော့အလှတတ်ကြည့်တာ.. ထမီပြင်ဝတ်လည်းအဆင်မပြေ.. ဖုန်းနှိပ်လည်းအဆင်မပြေ.. လမ်းမှာတင်ပြန်ခွာပစ်လိုက်ရတယ်..
ဖတ်ရတာ သွက်ပြီး ချောနေတာပဲ ။
မျက်တောင်တု တပ်ထားတဲ့ မိန်းကလေး ဆို
သူ့ အကြော်အိုးထဲ ပြုတ်ကျရင်တော့ အခက်
ဒီခေတ်မှာ.. မျက်တောင်အစစ်တွေရှည်လာအောင်.. ဆေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်.. တဲ့..
” အစစ်တွေရှည်လာအောင်.. ဆေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်.. တဲ့..
အစစ်တွေ ရှည်လာတာ ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ကွယ် ။
မိန်းကလေးတွေ လှချင်တဲ့ သဘောကို သိပါတယ် / လက်ခံပါတယ် ။
မွေးရာပါလေးက သိပ်မလှလို့ ၊ အတု အားကိုးတာကိုလည်း ၊
လုံးဝ ( လုံးဝ ) မ ကန့်ကွက်ပါဘူးကွယ် ။ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
သမီးလေးတို့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အထောက်အကူ ဖြစ်အောင်သာ ၊
အဘ ရဲ့ ခံစားချက် အမှန် ကို ပြောပြချင်းရယ်ပါ ။
အဘ ကို စိတ် မဆိုးကြပါနှင့် ။
မျက်တောင်တု ကို အစ က သိပ် တပ်ချင်စိတ် မရှိပါဘူးးးး
မိုးဟေကို တပ်တဲ့ မျက်တောင်တုတွေ က လှလွန်းလို့ တပ်ချင်တယ် လို့ ညည်းမိတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမို့ လှတာတဲ့ အပြင်မှာဆို အဲ့လောက် အထူကြီးက သိသာတယ်တဲ့။
နဂိုက မျက်တောင်က အရှည်ဆိုတော့ ထူ သွားစေတဲ့ မက်(စ) ကာရာလေးပဲ ရွေးသုံးဖြစ်တယ်။
အလှပြင် ပစ္စည်းထဲတော့ အဲဒါ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ တံဆိပ် အစုံ စမ်းသုံးဖူးတယ်။
ကျန်တာ တော့ မပြင်မဆင်ချင် ။ ဘာမှ စုံအောင်မရှိပဲ။
အားရင် ဒီ မျက်တောင်ပဲ သနေတာ။
ခု သူကြီးပြောတဲ့ ဆေး စုံစမ်းဦးမှ!!!
တလွဲပါဆို။ လူမသိတဲ့ နေရာ အလှအပြင် ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အလှဆုံးဖြစ် ချင် တယ်မျက်တောင် အတုလဲ မတပ်ချင် ဝူးးးဆိုရင်တော့
နည်းလမ်းကောင်းလေးပြေပြမယ် ချစ်သုဝေ ဆိုသလို ဘုရားဆုတောင်းပါ့့
နောက် နည်းလမ်း တခုက တော့
mascara ဝယ်မယ် ဆိုရင် ကိုနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ကို ရွှေးတတ်ဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ့့်
ကောင်တာမှာဝယ်မယ်ဆို ရင် တကယ် လို့ သဘာဝ ဆနန်ဆန် လေးပဲဖြစ်ချင် တယ် ဒါမှမဟုတ် နဂိုမျက်တောင် က တိုနေ ပါးနေတယ်
ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးသုံးရင် အဆင်ပြေမလဲ လို့ အရောင်းစာရေး ကို သေချာ မေးပြီးတော့ ဝယ်သင့်ပါတယ် မျက်တောင် ကော့ကော့ ထူထူလေးမှ ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ် volum up mascara က မစိမ်းပြာတို့ လှဖို့အတွက် သင့်တော်မယ် ထင် ပါကြောင်းး
တစ်ခါဒင်နာကို မျက်တောင်တုတတ်သွားဘူးပါတယ် လှတော့လှပါရဲ့ တစ်ချိန်လုံး ကိုယ့်ဘေးကလူကို မျက်တောင်အတုကြီးပြုတ်ကျသွားဘီလားဟင် ရှိသေးလားဟင်နဲ့မေးရတာ အစားကိုကောင်းကောင်းမစားရပါဘူး
လာဖတ်ပေးကြတဲ့ ၊ ကော့မက်ပေးသွားကြတဲ့ အကို၊ အမ ၊ မောင် ၊ညီမ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော် ။
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် တစ်ခါမှမျက်တောင်တု မတပ်ဖူးဘူး။
တပ်ရအောင်လည်း ဘယ်လိုပွဲကြီးပွဲကောင်းမှ ကြုံဖူးတာ မဟုတ်။
ကြုံလာလည်း ဘယ်လိုပြင်ပြင် လှနိုင်မှာ မဟုတ်တာကို သိနေတော့………. :D